အဘယ်ကြောင့် PETERHOUSE သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူထက်သာ။ ကောင်း၏ - ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ် - သတင်း
ကင်းဘရစ်ရဲ့အသက်အကြီးဆုံးနှင့်အသေးဆုံးကောလိပ်ဆန့်ကျင်နေတဲ့ကြောက်မက်ဘွယ်သောစကားမစပ်ထင်ရှား။ , The Tab မနှစ်က။ ၎င်းသည်ကင်းဘရစ်၏အဆိုးဆုံးကောလိပ်သရဖူဆောင်းထားသည်။
၎င်းတို့၏ရိုးရာ၊ ရှေးရိုးစွဲနှင့်နှေးကွေးစွာရွေ့လျားနေသောသဘာ ၀ များနှင့်အညီ Petreans သည်တုန့်ပြန်ရန်အဆောတလျင်မပြုခဲ့ပါ။ အချို့သောရပ်ကွက်များတွင်အင်တာနက်ကိုတပ်ဆင်ရန်အဆင်သင့်ရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်၍ သံသယများပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။
မီးသီးတစ်လုံးပြောင်းရန် Petreans မည်မျှယူသနည်း။
Petrean: ပြောင်းလဲပစ် ... ? မီးသီး..? ￼
သို့သော်ဒါဝိဒ်သည်ဂေါလျတ်ကိုဆန့်ကျင်ရန်အချိန်ရောက်လာပြီ။ သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူ, ယောဟန်ရဲ့, မင်းသမီး Emma ... သင်ဆဲနိုင်တုန်း။
လုံးဝအမှီအခိုကင်း။ ဘက်မလိုက်သော၊ ပညာရှိသောနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းမွန်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးသူ * သည်ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာဖြင့်ဖုံးကွယ်ထားသည့်ကင်းဘရစ်ခ်ျ၏မစ်ရှင်တွင်ဖြစ်သည်။ အမှန်တရားမှာထွက်ပေါ်လာသည်။ Peterhouse သည်အားလုံး၏အကောင်းဆုံးကောလိပ်ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်အကြောင်းပြချက် ၁၀ ခုရှိသည်။
1. ဒါဟာအသက်အကြီးဆုံးပါပဲ ။
သငျသညျ Peterhouse's- ခန်းမ - ဖြစ်ပါတယ် -The- အသက်အကြီးဆုံး - လောက - အဆောက်အ ဦး - အတွက် - ဥရောပ - နေဆဲ - အသုံးပြု - များအတွက် - ၎င်း၏ - မူလ - ရည်ရွယ်ချက်ကြားဖူးသလော (ဤနေရာတွင်စကားလုံးတစ်လုံးအဖြစ်အမြဲပြောပါ။ ) ၁၀ မိနစ်ကျော်ဤနေရာတွင်သင်အသုံးပြုခဲ့လျှင်သင်ပြုလိမ့်မည်။ ဖြစ်ကောင်းတစ်ကြိမ်ထက်ပို။ ကြောင်း Churchill အပေါ်စို့။
ကျွန်တော်တို့ဟာရုပ်ဆိုးတဲ့အဆောက်အအုံဌာနမှာလည်းအရမ်းနောက်ကျသွားမှာမဟုတ်ဘူး။ ဝီလျံကျောက်ခေတ်အဆောက်အအုံသည်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုနှင့်တွေ့ဆုံနိုင်သည့်အရာဖြစ်သည်။ ဒါဟာအုတ်မြစ်မရှိဘဲအရှည်ဆုံးလူသိများအဆောက်အ ဦး လည်းစွပ်စွဲပါတယ်။ ဒါဟာဒဏ္myာရီဖြစ်နိုင်သည်, ဒါပေမယ့်လေထန်သောနေ့၌အနည်းငယ်သာနှစ်သိမ့်ပါတယ်။
ကြီးကျယ်သောမကောင်းသော ၀ ံပုလွေသည်လက်ဖက်ရည်သောက်ရန်မမျှော်လင့်ပါနှင့်
အနုတ်လက္ခဏာဘက်မှာလျှို့ဝှက်ချက်မရှိဘူး။ အပေါင်းဘက်တွင် (သင်ကိုယ်တိုင်မှိုင်းနေလျှင်၊ အလွန်ဆိုးရွားလွန်းလျှင်) သင်သည်အခြားသူများ၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုသိသည်။
ဒါကကောလိပ်ရဲ့ကြီးမားတဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာနှင့်အတူကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ်။ အီတလီနိုင်ငံအတွက်တစ်လခရီးသွားခွင့်? ဟုတ်ကဲ့ အိန္ဒိယလား ဘာလို့မဖြစ်ရမလဲ။ အိုင်ဘီဇီကာ? ကျနော်တို့ကစဉ်းစားပါလိမ့်မယ်။
ပညာရေးစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများပါ ၀ င်မှုအတွက်အချက်များကိုချီးမြှင့်သည်။ ထို့ကြောင့်မရေရာသောလူ့အဖွဲ့အစည်းများသမ္မတရာထူးအတွက်တိုက်ပွဲ ၀ င်နေသော Petreans အရေအတွက်ကိုအမြဲတမ်းတွေ့ရလိမ့်မည်။ ငါမကြာသေးမီကပရိယာယ်တ Petroan ဆင်ခြင်ခြင်း, ပျံဝက် Society ၏သမ္မတအဖြစ် 8 တောင်းဆိုပါလိမ့်မယ်။
သင်နေထိုင်သူ albino hedgehog ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်လျှင် 10 မှတ်
၅။ မှားယွင်းသော ... ထူးခြားသောအားကစားစွမ်းရည်။
သတင်းများအရ Petreans အချို့သည်ဘောလုံးအကြောင်းကြားဖူးကြလိမ့်မည်ဟုဆိုကြသည်။ တချို့က (ရေး) နှင့်ဆင်တူတဲ့ဂိမ်းကစားခြင်းကိုပင်မြင်ကြပြီ။
Peterhouse သည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကော့ကော့တေးများသို့အများဆုံးအသင်းများဝင်ခဲ့သည်။ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သည်ဒုတိယအကျော့အထိဖြတ်သွားသည်။
ကောလိပ် mascot တစ်ဒိုဒိုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဟာကအများကြီးပါ
Peterhouse ၏ဘွဲ့ကြိုအချိုးအစားနှင့်ဘွဲ့ကြိုအချိုးသည်တက္ကသိုလ်တွင်အမြင့်ဆုံးဖြစ်ရမည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်သင်နေထိုင်ခဲ့သည့်ရာစုနှစ်ကိုမေ့လျော့ခြင်းကြောင့်ခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရနိုင်သည်။ အပျော်တမ်း၏ယဉ်ကျေးမှုသည်သက်ရှိထင်ရှားရှိပြီး၊ ရဲရင့်သောအုပ်စုတစ်စုကအောက်စ်ဖို့ဒ်သို့နောက်ဆုံး Michaelmas ကိုလမ်းလျှောက်သွားခဲ့သည်။ Madeira နှင့်ပြည့်နေသည့် Satchels သည်သူတို့၏တစ်ခုတည်းသောပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ၂၀ ရာစုအစောပိုင်းကာလနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်မည့်အခြားလုပ်ငန်းဆောင်တာများဆက်လက်ရှင်သန်နေဆဲဖြစ်သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်ထမင်းစားခန်းတစ်ခုအင်္ဂါရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ တရားဝင်အဖြစ်, စျေးပေါနှင့်နေ့စဉ်ဖြစ်ပါတယ် The Tab မကြာသေးမီကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ရလဒ်အဖြစ်အရည်အသွေးကိုက်ညီလိမ့်မည်။ သို့သော်ထိုသို့သင်သည်မှောင်မိုက်ဖြစ်မည်ဟုအာမခံထားသည်၊ သင်ဘာစားနေသည်ကိုမမြင်နိုင်ပါ။ အာလူးရွေးချယ်မှု၏အနံနှင့်အရည်အသွေးသည်ဒဏ္isာရီဆန်နေသည်။
ဒါကစတော့ရှယ်ယာရဲ့တစ် ဦး '' ကောက်ခြင်းနှင့်ရောနှော '' သဘောထားကိုသောဘားတစ်ခုခရီးနှင့်အတူပေါင်းစပ်ရပါမည်။ ဤသည်ဆန်းသစ်ခြင်းနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားစရာပေါင်းစပ်လိုအပ်သည်။ ဗော့ဒ်ကာနှင့်ပန်းသီးမည်သူမဆို?
တကယ့်မဖြစ်မနေလုပ်ရမည့် Peterhouse ကော့တေးအထူးသည်လှပသော 'Quick Fuck' ဖြစ်သည်။
ပျမ်းမျှ Petrean ညစာ
1980 ၏ Peterhouse အစုံခံစားခံစားကြောက်မက်ဘွယ်သောဂုဏ်သတင်း၌ပျော်မွေ့။
Maurice Cowling နှင့်သူ၏ညာတောင်ပံခရိုနီများသည် ၁၉ ရာစု၏သမိုင်းကိုသူတို့မကျေနပ်မှုများနှင့်လူကြိုက်များခြင်းများကိုပြောင်းလဲရန်သူတို့၏သူရဲကောင်းအားထုတ်မှုကိုဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သော pugnacious အထီးကျန်နေဆဲ Peterhouse epitomizes ။
လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သော Adonian ထမင်းစားခန်းလူ့အဖွဲ့အစည်းသည်ယနေ့တွင်ဆက်လက်တည်ရှိသည်။ Michael Portillo (လိမ္မာပါးနပ်စွာဖော်ပြထားသောအကြောင်းပြချက် (၇)) အားသူ၏စအိုအပျိုစင်ဘ ၀ ဆုံးရှုံးမှုဟုစွပ်စွဲထားသောအခန်းသည်အပြာရောင်ပြားတစ်ချပ်ဖြစ်သည်။
Petrean တစ်ယောက်အားအဆိုးရွားဆုံးကောလိပ်ခေါင်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ သူတို့ဘာထင်သလဲဟုမေးသောအခါသူတို့က 'မင်းဘာလို့ဒီစာကိုရေးရတာလဲ။ ' 1284 ခုနှစ်မှစ၍ မည်သူမဆိုထင်မြင်ယူဆခဲ့သည့်အရာကိုကျွန်ုပ်တို့သည်မပြောခဲ့ပါ။ အခြားကောလိပ်များရှိပါသေးတယ်။
နောက်ထပ် Petreans မှတ်ချက်ပေးရန်တောင်းခံခဲ့ရသည်, ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမရရှိနိုင်ခဲ့ကြသည်။ သူတို့ကပဲဂရုမစိုက်ခဲ့ပါဘူး။
အမှတ် ၂၀ ရမယ်၊ ဘယ်ရာစုကဒီယူသွားတယ်ဆိုတာမင်းခန့်မှန်းနိုင်တယ်
အရာ၏ပြောနေတာငါငါ့ Petrean အာရုံမှလာပါတယ်။ ဘာကြောင့်ပိုရေးတာလဲ ကျွန်ုပ်တို့သည်ထင်ရှားမှုမရှိခြင်း၊ ကိုယ်စားပြုဖော်ပြခြင်းခံရသော်လည်းမိမိကိုယ်ကိုကျေနပ်ရောင့်ရဲခြင်းအားဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်အလွန်ပျော်ရွှင်ပါသည်။
ပြင်ပကမ္ဘာသို့ပြန်လည်လည်ပတ်ရန်လိုအပ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ခံစားရလျှင် (သင်မဖြစ်နိုင်ပါ) ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုကြည့်ပါ။
ဤအတောအတွင်းငါအချို့သော croquet ကစားရန်ပယ်တယ်။ ဆိုးတာပေါ့။
စာရေးသူသည် Peterhouse သို့သွားပြီးသမိုင်းကိုလေ့လာပါ၊ အချက်အချာကျသောအရသာမရှိသောဒေးဗစ်မစ်ချယ်သည်အတော်လေးရယ်စရာကောင်းသည်ဟုထင်နိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်အချက်အနားမှာပါပဲ။